Andrim-pitondran’ny fahefana avo	Manao ala-safay daholo
Ny ravin-taratasy vita rango-pohy sisa no tena anto-pijoroan’izao fahefana mitondra an’i Madagasikara izao, ary na ny lalàna manan-kery ho fanamarinana izany aza dia tsy misy na iray aza. Minia mangina sy tsy handrenesam-peo ny HCC, ka manao fanambarana ny filoha afrikana tatsimo fa ny sori-dalana nasiam-panovàna no tokony hampiharina eto. Tsy hay intsony na mahaleotena ny tanintsika , na tsia. An-ditra sy alasafay fotsiny ny filazana fa hovitaintsika ny fifidianana sy ny fitsaharan’izao krizy izao, kanefa miharihary loatra ny tsy fahombiazana. Fahefana avy aiza no nahafahana nanangana fitondrana avy amin’ny alalan’ny sonia rangopohy ? Mampieritreritra ! Sur le même sujet :
Ny filoha Ravalomanana no tompon’Antoka sy Fahefana ao… Minisi-panjakan’ny Fahefana Avo Rakotoarisoa Yves Aimé : Tokony hametra-pialàna avy hatrany Ny vahoaka no tompon’ny fahefana Auteur Ony RambeloPublié le 20 juin 2011Catégories Malagasy, Politique	3 pensées sur “Andrim-pitondran’ny fahefana avo”	ra dile dit :	21 juin 2011 à 7 h 46 min	Mazava be ! » La fin justifie le moyen « KintanaMananDrambo dit :	21 juin 2011 à 8 h 09 min	Ny HCC angamba mbola mi-cuver Jy sy By daholo, sady voky cosondelé !!
zava-misy dit :	21 juin 2011 à 8 h 26 min	Tsy andrimpanjakana intsony izany HCC izay fa andrin-dRajoelina sy ny forongony.
Précédent Article précédent : Fetim-pirenen’ny Gasy isaky ny 26 jonaSuivant Article suivant : Tsy hamela ny Filoha Ravalomanana hody irery an-Tanindrazana ny vondrona SADC !